Ebumnuche 10 kacha elu iji wulite weebụsaịtị gị na WordPress | Martech Zone
Na azụmaahịa ọhụrụ, ị dịla njikere ịbanye n'ahịa mana enwere otu ihe na-efu, weebụsaịtị. Azụmaahịa nwere ike igosipụta akara ngosi ha ma gosipụta ụkpụrụ ha ngwa ngwa nye ndị ahịa site na enyemaka nke weebụsaịtị mara mma.
Inwe ebe nrụọrụ weebụ dị mma, na-adọrọ mmasị bụ ihe dị mkpa n'oge a. Mana kedu nhọrọ iji wuo weebụsaịtị? Ọ bụrụ na ị bụ ọchụnta ego ma ọ bụ na ịchọrọ ị wuo ngwa gị n'oge mbụ WordPress bụ ihe nwere ike imezu ihe ị chọrọ n'ụzọ dị oke ọnụ.
Ka anyị lelee ihe 10 na-esonụ mere WordPress ji dị mkpa maka azụmahịa gị iji dịrị ndụ na ahịa a na-agbanwe agbanwe.
Wụpụta weebụsaịtị gị na WordPress n'ụzọ dị mma - WordPress bụ n'efu. Ee! ọ bụ eziokwu. O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ịchọrọ ebe nrụọrụ weebụ azụmaahịa ma ọ bụ na ịchọrọ mpaghara post blọgụ nkeonwe, nke bụ eziokwu bụ WordPress anaghị ewe ụgwọ ma ọ bụ ebubo ezoro ezo. N'aka nke ọzọ, WordPress bụ usoro mmeghe na-enye gị ohere ịkwalite ma ọ bụ gbanwee koodu isi ya nke pụtara na ị nwere ike ịhazi ogo ma ọ bụ arụmọrụ websaịtị gị.
Ntuziaka enyi na enyi - Ejiri WordPress n'ụzọ dị mfe nke na-enyere ndị ọrụ aka na ndị na-abụghị ndị ọrụ aka aka. Ọ bụ isi ihe kpatara nnukwu ọchịchọ maka WordPress n'ụwa niile. N'aka nke ọzọ, WordPress dị mfe iji ma ọ na-enyekwa ndị ọrụ ohere ịmepụta ibe weebụ ha, posts, menus na obere oge. Nwere ike ịsị na ọ na-eme ka ọrụ ndị mmadụ dị mfe.
Mfe ibudata Gburugburu na ngwa mgbakwunye - Anyị ekwuola na nkwado nke WordPress ị nwere ike ịmepụta weebụsaịtị gị n'ụzọ dị oke ọnụ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnweghị ụdị nke WordPress, ka ị ghara ichegbu onwe gị, ebe a ọtụtụ narị isiokwu na plugins dị na ị nwere ike ibudata na weebụsaịtị gị. Ọ bụrụ n’ịchọta isiokwu dabara adaba n’efu na mgbe ahụ ọ nwere ike ịchekwa narị kwụrụ narị.
WordPress nwere ike n'ọtụtụ na mfe - Iji wuo ebe nrụọrụ weebụ dị irè ị ga-azụ ngalaba na nnabata. Ọnụ ego Bochum bụ $ 5 kwa ọnwa mgbe ngalaba aha na-efu ihe dị ka $ 10 kwa afọ. Ihu ọma, WordPress nwere ike ịbawanye mkpa azụmahịa gị ka ọ ghara ịkwụ ụgwọ mgbe ị ruru okporo ụzọ zuru oke ma ọ bụ ịchọrọ ịgbasa weebụsaịtị gị. Ọ dị ka ịzụrụ egwuregwu vidiyo. Mgbe inwere ya, onweghi onye nwere ike igbochi gi iji ya.
Njikere iji - Mgbe ị wụnye WordPress ị nwere ike ịmalite ọrụ gị ozugbo. Ọ chọghị nhazi ọ bụla, ewezuga nke a ị nwere ike ịhazi isiokwu gị nke ọma, yana ị nwere ike iji nkwụnye kwesịrị ekwesị. Imirikiti oge ị na-achọ maka nrụnye dị mfe nke nwere ike ịhazi ndepụta ntanetị mmekọrịta, nkọwa, wdg.
WordPress na-emeziwanye - The mmelite mgbe niile abụghị maka nzube nchekwa naanị; ha na-enye atụmatụ ndị dị elu mgbe niile na-eme ka ikpo okwu dị mma maka ndị ọrụ niile. Ọzọkwa, ndị ọkachamara ọkachamara nke ndị mmepe 'na-emelite ihe mgbakwunye ọhụrụ dị iche iche iji mee ka onye ọrụ ahụ nwee mmasị. Kwa afọ ha webatara atụmatụ ọdịnala ma nye ndị ọrụ ohere inyocha ya.
Otutu Mediadị Media - Onye ọ bụla chọrọ ime ka ebe nrụọrụ weebụ ha dị ọgaranya ma na-ekere òkè. Youchọrọ itinye ozi ndị ọzọ na ibe “gbasara anyị”. Ebe nrụọrụ weebụ na-adọrọ adọrọ karị ma ọ bụrụ na ọ gụnyere vidiyo na-atọ ụtọ ma ọ bụ ihe ngosi ihe oyiyi. Ee! WordPress na-enye gị nhọrọ iji tinye ndị na-enweghị ntụpọ n'ụzọ dị egwu. Have ga-ịdọrọ na dobe ihe oyiyi ma ọ bụ i nwere ike idetuo-mado njikọ gị na-ahọrọ video na ọ ga-egosi na a di ntakiri oge etiti. Ọzọkwa ị pụrụ ịgụnye dị iche iche faịlụ na ụdị, dị ka .mov, .mpg, mp3, .mp4, .m4a.3gp, .ogv, .avi, .wav, .mov, .mpg n'etiti ndị ọzọ. Ọ na-enye gị nnwere onwe bulite ihe ị chọrọ na-enweghị nsọtụ.
Kwusaa ọdịnaya na obere oge - Á »If bá» If rá »If rá» If na á »‹ chá »rá» á »‹ bipá »post ta gá» ‹post na a ngwa ngwa á» then zá »mgbe ahá» WordPress WordPress ga-gá »‹ otu nkwụsị azịza. Ole na ole clicks gị òké, ị nwere ike bipụta gị ọdịnaya magically. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị nwere ngwa nke WordPress na ekwentị mkpanaaka gị mgbe ahụ ị nwere ike bipụta post gị site na ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla.
Nwere mgbagwoju anya na HTML Code? - HTML abụghị iko onye ọ bụla. Mana WordPress na-enye gị ikpo okwu ebe ị nwere ike bulite post gị na-enweghị nkwado nke HTML. Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịmepụta ibe ma debe akwụkwọ gị oge niile na-enweghị ihe ọmụma nke HTML.
Ọ dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi kwa - Obi abụọ adịghị ya, WordPress bụ usoro mmepe weebụ dị ike nke na-ejikwa nsogbu nchekwa gị. WordPress na-egosipụta mmelite oge niile na ihe nchedo weebụ nke na-echekwa gburugburu ebe obibi echedoro gị. Site na nlekọta ụfọdụ, ị nwere ike ijikwa weebụsaịtị WordPress gị site na hacking.
Dị ka ị maara, WordPress bụ weebụsaịtị ma ọ bụ azụmahịa. Ọ na-eji amamihe edozi usoro njikwa ọdịnaya gị ma na-enye gị nnwere onwe nke mbipụta na-enweghị oke oke. Á »If bá» rá »If na á» ‹chá» rá »na-ewu gá» ‹website na i nweghá» ‹ego zuru ezu na-ewu ya mgbe ahá» be WordPress ga-gá »‹ otu nkwụsị azịza. Nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị n'ụzọ dị irè. Olileanya na isiokwu a na-enye gị echiche gbasara uru na mkpa nke WordPress na ahịa ahịa a na-agbanwe agbanwe.
Tags: content Marketingnchịkọta akụkọHTMLụdị multimediapluginsdị njikere ijipụrụ ịdabere na yaọnụ ọgụgụnọrọ ná nchebethemesọrụ na onye-enyi na enyi interfaceWordPress